ओसाका नोभेम्बरमा मौसम! तापमान र वर्षा - Best of Japan
ओसाका महल पार्क ओसाका जापान = शटरस्टकमा बोर्डवाटमा सँगै र Color्गीन रूखहरू
जापानमा नोभेम्बर! सबै भन्दा राम्रो र आरामदायक पर्यटन मौसम! >
ओसाकाको मौसम टोकियो र क्योटोमा लगभग समान छ। मौसम नोभेम्बरमा स्थिर छ, र त्यहाँ धेरै घमाइला दिनहरू छन्। तापक्रम सुन्दर छ, र यसलाई दर्शनीय स्थलहरूको लागि उत्तम मौसम भन्न सकिन्छ। ओसाकामा, शरद leavesतुको पातहरू नोभेम्बरदेखि मध्य डिसेम्बरको शुरुमा पुगेको हुन्छ। यस पृष्ठमा, म ओसका नोभेम्बरको मौसमको बारेमा विवरण दिनेछु।
तल नोभेम्बरमा टोकियो र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा केही फरक छ।
नोभेम्बरमा ओसाकामा मौसम (अवलोकन)
ओसाका मौसम नोभेम्बर (२०१ 2017) को सुरूमा
नोभेम्बर (२०१ 2017) को बीचमा ओसाका मौसम
नोभेम्बर (२०१ 2017) मा ओसाका मौसम
ग्राफ: नोभेम्बरमा ओसाकामा तापमान परिवर्तन
नोभेम्बरमा ओसाकाको तापमान दिनको तातो घण्टामा पनि २० डिग्री सेल्सियस भन्दा कम छ। यदि तपाईं अलिकता हिड्नुभयो भने पनि तपाई पसिना भन्दा थकित हुनुहुन्न। यो धेरै रमाइलो मौसम हो, त्यसैले कृपया विभिन्न स्थानहरू हेर्नुहोस् र हेर्नुहोस्।
जे होस्, बिहान र बेलुका तापमान १०-१-10 डिग्रीमा खस्नेछ। यो एकदम चिसो छ, त्यसैले म तपाईंलाई मोटो ज्याकेट ल्याउन सिफारिस गर्दछु।
तापक्रम यसै झर्दै जाँदा ओसाका रूखहरू बिस्तारै रातो पातमा परिणत हुन्छन्। मलाई लाग्छ कि तपाइँ ओसाकामा शरद पातहरू रमाउन सक्नुहुन्छ विशेष गरी नोभेम्बरको अन्तमा। ओसाका कासल पार्क र अन्यमा जानुहोस्।
ओसाकामा शरद winterतुदेखि जाडोसम्म वर्षाका दिनहरू कम हुनेछन्। एक सुन्दर निलो आकाश दिन जारी छ। किनभने हावा खाली छ, यदि तपाईं राम्रो दृश्यको साथ ठाउँमा जानुभयो भने, तपाईंले टाढाको पहाडहरू देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै रोक्को पर्वत राम्रोसँग।
ओसाकामा नोभेम्बरको जापानी मौसम एजेन्सीले घोषणा गरेको मौसमिय तथ्यांक तल छ। कृपया आफूलाई उपयोगी बनाउनुहोस्।
अधिकतम तापमान (सेल्सियस) 22.3
न्यूनतम वायु तापमान 7.6
राम्रो मौसम अनुपात 73%
नोभेम्बर,, २०१ - - ओसारमा क्यासल पुलबाट पर्यटक शरद =तु = शटरस्टकमा
नोभेम्बरको सुरुमा ओसाकामा शरद पातहरू अझै सुरु भएको छैन। यद्यपि त्यहाँ धेरै राम्रा र घमाइलो दिनहरू छन्। तपाईं आरामदायी यात्राको मजा लिनुहुनेछ।
ओसाकामा नोभेम्बरको सुरुमा सूर्योदय समय करीव :6:२१ हो, र सूर्यास्त समय लगभग १:21::17० हुन्छ।
अधिकतम तापमान (सेल्सियस) 18.6
न्यूनतम वायु तापमान 4.8
कुल वर्षा 39.9 मिमी
राम्रो मौसम अनुपात 49%
नोभेम्बर १,, २०१:: ओसाका जापान = शटरस्टकमा शरद seasonतु मौसममा ओसाका कासल पार्क
नोभेम्बरको बीचमा, तपाईंलाई बिहान र बेलुका चिसो लाग्न सक्छ। मेरो सिफारिश छ कि तपाइँ जम्पर आदि ल्याउनुहोस्। राम्रो मौसम दिनहरू यस समयमा पनि जारी रहनुहोस्।
ओसाका मध्य नोभेम्बरमा सूर्योदय समय करीव 6::31१ र सूर्यास्त समय लगभग १:16::54 छ।
कुल वर्षा 13.0
नोभेम्बर २,, २०१:: माइनो झरना पर्यटकहरूले भरिएको शरद seasonतुको मौसममा फोटो लिए
ओसाका नोभेम्बरको अन्तमा यसको उत्तम पर्यटन मौसम हुनेछ। शरद पात धेरै सुन्दर छन्। धेरै आरामदायक घाम दिनहरू जारी।
ओसाकामा नोभेम्बरको अन्तमा सूर्योदय समय करीव 6::41१ र सूर्यास्त समय लगभग १:16::49 XNUMX हुन्छ।
※ सूर्योदय र सूर्यास्त समयहरू जापानको नेशनल एस्ट्रोनोमिकल वेधशाला द्वारा जारी गरिएको २०१ data डाटामा आधारित छन्। मैले नोभेम्बरको सुरूवातको लागि 2019th औं समय, नोभेम्बरको बीचमा १5औं समय र नोभेम्बरको अन्त्यको लागि २th औं समय पोस्ट गरें।
>> जापानमा शरद पोशाक! तपाईंले के लगाउनु पर्छ?
"नोभेम्बर" मा फिर्ता